အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မြေပုံ ကယ်လီဖိုးနီးယား အရောင်ခြယ်ပြထား
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် မြောက်ဘက်တွင် အိုရီဂွန်ပြည်နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် နီဗားဒါးပြည်နယ် နှင့် အရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ ဘာဂျာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။​ပြည်နယ်၏ အမျိုးစုံသော ပထဝီဝင်တွင် အနောက်ဘက်ရှိ ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှ အရှေ့ဘက်ရှိ ဆီးရားနီဗားဒါးတောင်တန်းများအထိ ၊ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ဆီကွိုင်းယား နှင့် ဒေါက်ဂလပ်ထင်းရှူးတောများနှင့် အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ မိုဂျေ့ဗ်သဲကန္တာရအထိ အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ဒေသဖြစ်သော ဗဟိုတောင်ကြားသည် ပြည်နယ်၏ အလယ်ဗဟိုကို စိုးမိုးထားသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားအား ပူနွေးသော မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတုကြောင့် ကျော်ကြားသော်လည်း ပြည်နယ်၏ အရွယ်အစားကြီးမားသောကြောင့် ရာသီဥတုသည် မြောက်ဘက်ရှိ ပူနွေးသော မိုးသစ်တော ရာသီဥတုမှ အတွင်းပိုင်းတွင် ခြောက်သွေ့သော သဲကန္တာရ အထိနှင့် တောင်ကုန်းများတွင် နှင်းကျသော အယ်လ်ပိုင်းရာသီဥတု အထိ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ကွဲပြားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ပက်ကြားအက်ခြင်းနှင့် တောမီးလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်မှု ပိုစိတ်လာသည်။
ယခု ကယ်လီဖိုးနီးယားနေရာတွင် အစကနဦးက ဒေသရင်းကယ်လီဖိုးနီးယား လူမျိုးစုများ နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်မှာ ၁၆ ရာစုနှင့် ၁၇ ရာစုအတွင်း ဥရောပသား အမြောက်အများတို့ စူးစမ်းရှာဖွေသည် အထိ ဖြစ်သည်။ စပိန်အင်ပိုင်ယာမှ သိမ်းပိုက်ပြီး ကိုလိုနီအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၈၀၄ ခုနှစ်တွင် နယူးစပိန် နယ်စားဒေသအတွင်းရှိ အော်လ်တာ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အောင်မြင်သော လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲအပြီး ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် ထိုဒေသသည် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၈၄၈ မက္ကဆီကို-အမေရိကန် စစ်ပွဲ အပြီးတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ အော်လ်တာ ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ အနောက်ဘက်အပိုင်းကို စုစည်း၍ ၁၈၅၀ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ၃၁ ခုမြောက် ပြည်နယ်အဖြစ် လက်ခံခဲ့သည်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင် စတင်သော ကယ်လီဖိုးနီးယား ရွှေနောက် အပူတပြင်း လိုက်ကြသည့် အဖြစ်အပျက်မှ သိသာသော လူမှုရေးနှင့် လူဦးရေပျံ့နှံ့နေထိုင်မှုတို့ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ စီးပွားရေး တိုးတက်လာခြင်းနှင့် အတူ အရှေ့ဘက်မှ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားမှ အကြီးအကျယ် ရွှေ့ပြောင်း ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းရိုးတန်းအား ပထမဆုံး စွန့်စားသွားလာခဲ့ကြသူများမှာ ဟွမ် ရိုဒရီဂေ့ ကာဗရီဟိုး ဆိုသော ပေါ်တူဂီ ရေယာဉ်မှူး တစ်ဦးမှ ဦးဆောင်သော ရွက်လွင့်ခရီးသွားလာသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး သူတို့သည် ၁၅၄၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်တွင် စန်ဒီယေးဂိုး ပင်လယ်အော်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ မြောက်ဘက်တွင် ဆန်မစ်ဂူရယ်ကျွန်းအထိ အနည်းဆံုး ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ၁၅၇၉တွင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ရေတပ်ဗိုလ်နှင့် စူးစမ်းရှာဖွေသူ ဖရန်စစ်ဒရိတ်မှ ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းရိုးတန်း၏ တစိတ်တဒေသကို သိမ်းပိုက်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ကာ နောက်တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ဖြစ်လာမည့် နေရာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ကမ်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာမည့် နေရာသို့ အာရှသားတို့ ပထမဆုံး ခြေချခြင်းမှာ ၁၅၈၇ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး စပိန်သင်္ဘောနှင့် လိုက်ပါလာသော ဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောသားတို့ မော်ရိုပင်လယ်အော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စီဘက်စတီးယန်း ဗစ်ကိုင်နိုသည် ကယ်လီဖိုးနီးယား ကမ်းရိုးတန်းအား နယူးစပိန်အတွက် ၁၆၀၂ ခုနှစ်တွင် စူးစမ်းသွားလာကာ မြေပုံ​ရေးဆွဲခဲ့ပြီး မြောက်ဘက် မန်ဒိုချီနို အငူအထိ ရွက်လွှင့်သွားလာခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးရခါစဖြစ်သော မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ အစောပိုင်းအစိုးရမှ အလွန်မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် ၁၈၃၁ နောက်ပိုင်းတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၌ အချင်းချင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများနှင့် ဗဟို မက္ကဆီကို အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့သို့ မုန်တိုင်းထန်သော နိုင်ငံရေးကာလ အတွင်းတွင် ယွမ် ဘော်တစ်စတာ အယ်လ်ဗာရာဒိုသည် ၁၈၃၆ မှ ၁၈၄၂ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာထူးကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။အယ်လ်ဗာရာဒို အာဏာရလာသော စစ်ရေးလုပ်ဆောင်မှု အပြီးတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံအဖြစ် တခဏတာမျှ ကြေငြာနိုင်ခဲ့ပြီး အိုင်ဆက် ဂရေဟမ် အပါအဝင် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ အန်ဂလို-အမေရိကန် ပြည်သူများက ကူညီခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။၁၈၄၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသော ပြည်သူ ၁၀၀ ကျော် အဖမ်းအဆီးခံရပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် "ဂရေဟမ် အရေးအခင်း" ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ တော်ဝင်ရေတပ်မတော်မှ တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ စနစ်တကျစီစဉ်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းမှုကာလကို ဦးဆောင်ပြီးနောက် မာ့ရှ်သည် လူအများမုန်းတီးကြသော မက္ကဆီကန်ဗိုလ်ချုပ် မန်နျူရယ် မီရှဲတိုရီနာ နှင့် သူ အစားထိုးခဲ့သော ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ယွမ် ဘော်တစ်စတာ အယ်လ်ဗာရာဒို တို့နှစ်ဦးကြား စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူတို့အသီးသီး၏ စစ်တပ်များသည် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ အနီးတွင် ဖြစ်ပွားသော ပရိုဗီဒန်းရှားတိုက်ပွဲတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ မာ့ရှ်အနေနှင့် သူ၏ ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်၍ မီရှဲတိုရီနာ၏ စစ်တပ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ရသည်။ သူ၏ အထက်အရာရှိများကို လျစ်လျူရှု၍ သူ့အနေနှင့် အခြားတစ်ဘက်အား စစ်ပြေငြိမ်းရန် အချက်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ လာရောက် အခြေချ နေထိုင်သူများမှာ နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်လျှက် ရှိသည်။ သူ့အနေနှင့် ထိုလူများကို အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ရန် အကြောင်းမရှိကြောင်း သဘောပေါက် နားလည်စေခဲ့သည်။ မာ့ရှ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် သူတို့သည် စစ်ပွဲကို စွန့်ခွာခဲ့ကြသဖြင့် မီရှဲတိုရီနာမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် မွေးဖွားသော ပီကို-ပီကို မှ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖြစ် ပြန်လည် အာဏာရခဲ့သည်။ ထိုအချက်မှ နောက်ဆုံးတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားအား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ သွတ်သွင်းရန် အတွက် လမ်းခင်း ပေးခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ နှင့်အောင်နိုင်ခြင်း
၁၈၅၀ ခုနှစ်နှင့် ၁၈၆၀ ခုနှစ်ကြားတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယား အစိုးရသည် ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်း (၂၅၀,၀၀၀ ခန့်မှာ ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှ ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။)  ကို အသုံးပြု၍​ ကြေးစားစစ်သားများကို ငှားရမ်းကာ ၎င်းတို့၏ အလုပ်မှာ အခြေချနေထိုင်သူများအား ရှေဦးနေ လူမျိုးတို့၏ ရန်မှ ကာကွယ်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ နောင် ဆယ်စုနှစ်များတွင် ဒေသရင်း လူတို့အား ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ နှင့် ရန်ချယ်ရီးယပ်စ် ခေါ် အခြေချ နေထိုင်ရာ နေရာများတွင် ထားရှိခဲ့ကြပြီး ထိုနေရာများမှာ သေးငယ်၍ တစ်သီးတစ်ခြား ဖြစ်ပြီး သဘာဝ အရင်းအမြစ် အလုံအလောက် မရှိသည့်အပြင် ထိုဒေသတွင် နေထိုင်သူတို့ အသက်ဆက်ရန် အတွက် အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ခြင်း လည်း မရှိပေ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယား တိုးတက်လာခြင်းသည် ဒေသရင်း နေထိုင်သူတို့အတွက် မုန်တိုင်းကြမ်း တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ အချို့သော ပညာရှင်များနှင့် ဒေသရင်း အမေရိကန် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ဖြစ်သည့် ဘင်ဂျမင် မက်ဒလေ နှင့် အက်ဒ် ကက်စတီလိုတို့မှ ကယ်လီဖိုးနီးယား အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၉၀၀ မှ ယနေ့ခေတ်
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မပြင်းထန်သော မြေထဲပင်လယ် ရာသီဥတု၊ ဈေးပေါသောမြေ နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အမျိုးမျိုးသော ပထဝီ အနေအထားတို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများသည် ၁၉၂၀ ခုနှစ်များ အတွင်း၌ စတူဒီယို စနစ်များကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စစ်လက်နည်ပစ္စည်း ၈.၇% ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ် ၄၈ ခုတွင် နယူးယောက် နှင့် မီရှီဂန်တို့၏ နောက် တတိယနေရာမှ လိုက်သည်။သို့သော်လည်း ကယ်လီဖိုးနီးယားသည် စစ်အတွင်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများ (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်တင်သင်္ဘောနှင့် ကုန်သည်သင်္ဘောများ ဖြစ်သော လစ်ဘာတီသင်္ဘော နှင့် ဗစ်ထရီသင်္ဘော တို့အပြင် စစ်သင်္ဘောများ) ထုတ်လုပ်ရာ၌ ပထမနေရာတွင် ရှိပြီး ဆန်ဒီယေးဂိုး၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပင်လယ်အော်ဒေသ ရှိ ကုန်းတွင်း သင်္ဘောကျင်းများတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင် လေကြောင်းအာကာသ နှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း လုပ်ငန်း တို့ကြောင့် ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ စီးပွားရေးသည် များစွာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲ အပြီးတွင်မူ ၎င်းတို့၏ ပမာဏမှာ လျော့ကျလာခဲ့သည်။ စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် နှင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ အကြီးအမှူး ဖရက်ဒရစ် တာမန်း တို့မှ မဟာဌာနများ နှင့် ဘွဲ့ရများကို ပြည်နယ်မှ ထွက်ခွာမည့် အစား ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ဆက်လက်နေထိုင်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ဆီလီကွန်တောင်ကြားဟု ခေါ်သော မြင့်မားသည့် နည်းပညာဒေသ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏ ရာသီဥတုမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသာယာဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလေသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် သဘာဝ အလျောက် သာယာသော ရှုမျှော်ခင်းတို့ဖြင့် ပြည့်စုံသည့် ပြည်နယ် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုပြည်နယ်တွင် သေမင်းချိုင့်ဝှမ်းဟု ခေါ်သော ဆန်းကြယ်သည့် ချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ထိုချိုင့်ဝှမ်းသည် ပင်လယ်ပြင်အောက် ပေ ၂၈ဝ မျှ နိမ့်လေသည်။ ကြီးမားလှသော သစ်ပင်ကြီးများ ပေါက်ရောက်၍ ထင်ရှားသည့် ဆီယယ်ရာ နီဗားဒ တောင်တန်းတွင်ရှိသော ဝှစ်တနီ တောင်ထိပ်သည် အလာစကပြည်နယ်ရှိ တောင်ထိပ်တစ်ခုကို ချပ်လှပ်လျှင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်၍ ပေပေါင်း ၁၄၄၉၅ ပေမျှ မြင့်သည်။
နီဗားဒတောင်တန်းနှင့် ကို့စရိန့်တောင်တန်းနှစ်ခုကြားတွင် ကာလီဖိုးနီးယားချိုင့်ဝှမ်းကြီး ရှိလေသည်။ အနောက်ဘက်ရှိဝီလဆန်တောင်ပေါ်၌ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အရေးပါ ဆုံး နက္ခတ်မျှော်စင်ကြီးတစ်ခု ရှိ၏။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ အနီးတွင် ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်မြို့ကြီး တည်ရှိလေသည်။ မက္ကဆီကို နိုင်ငံဘက်ကျသော ဆန်ဒီယေးဂိုးမြို့နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပင်လယ်အော် ကမ်းနဖူးတွင်ရှိသော အုတ်ကလန်မြို့တို့မှာလည်း အတန်ထင်ရှားသောမြို့များ ဖြစ်ကြပေသည်။
Government Code Section 420-429.8။ State of California Legislative Council။ December 24, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Extreme and Mean Elevations by State and Other Areas (PDF)။ United States Census (2004)။ 2008-11-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
York, Anthony။ "Brown sworn in as California's 39th governor"၊ Los Angeles Times၊ 2011-01-04။ 2011-01-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Coté၊ John။ "Lt. Gov.-elect Gavin Newsom to be sworn in by Jan. 10"၊ SFGate.com၊ Hearst Newspapers၊ December 31, 2010။ January 3, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
American FactFinder—Results။ U.S. Census Bureau။ 24 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
GDP by State | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)။
Report for Selected Countries and Subjects။
World Population Prospects—Population Division—United Nations။
U.S. metro areas—ranked by Gross Metropolitan Product (GMP) 2020 | Statistic။ May 31, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
GDP by Metropolitan Area | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) (in en)။
Largest Companies by Market Cap Today • Dogs of the Dow (in en-US) (2019-06-17)။
"Bloomberg Billionaires Index"၊ Bloomberg.com။
Happy 25th anniversary, World Wide Web။ CalWatchdog.com (March 13, 2014)။
Weller၊ Chris။ The most important invention from every state။
Some People Don't Know These 10 Things Came From Southern California (June 18, 2016)။
15 Things the world needs to be thanking California for။
California Gross domestic product (GDP) (millions of current dollars)။ U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis။
Palmer၊ Brian (July 10, 2013)။ The C-Free Diet။ Slate။
CDFA—Statistics။ California Department of Food and Agriculture။
"California farms producealot of food—but what and how much might surprise you"၊ Orange County Register၊ July 27, 2017။
"California's most destructive wildfire should not have come asasurprise"၊ Los Angeles Times၊ November 10, 2018။
Advancing Drought Science and Preparedness across the Nation။ National Integrated Drought Information System။
Tillman၊ Linda C.; Scheurich၊ James Joseph (August 21, 2013)။ The Handbook of Research on Educational Leadership for Equity and Diversity။ Routledge။ p. 202။ ISBN 978-1-135-12843-2။
Huping Ling (April 29, 2009)။ Asian America: Forming New Communities, Expanding Boundaries။ Rutgers University Press။ p. 109။ ISBN 978-0-8135-4867-8။
California as an Island in Maps—Online Exhibits။
California Indian History—Native American Caucus။
Introduction။ National Park Service။
Altman၊ Linda Jacobs (2005)။ California။ Marshall Cavendish။ p. 117။ ISBN 978-0-7614-1737-8။ March 16, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Starr၊ Kevin (2007)။ California: A History။ Modern Library။ pp. 17–။ ISBN 978-0-8129-7753-0။
Hart၊ James David (1987)။ A Companion to California။ University of California Press။ p. 315။ ISBN 978-0-520-05544-5။ March 16, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Billington၊ Ray Allen; Ridge၊ Martin (2001)။ Westward Expansion: A History of the American Frontier။ University of New Mexico Press။ p. 203။ ISBN 978-0-8263-1981-4။ February 16, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
William B. Ide Adobe SHP။ California State Parks။
Bear Flag Revolt။ History.com (2015)။
The U.S. Mexican War။ KPBS (1999)။
Spencer Tucker (Militärhistoriker) (2013)။ The Encyclopedia of the Mexican-American War: A Political, Social, and Military History။ ABC-CLIO။ pp. 55–56။ ISBN 978-1-85109-853-8။
The Quarterly။ Historical Society of Southern California။ 1907။ pp. 199–201။
Osborne၊ Thomas J. (November 29, 2012)။ Pacific Eldorado: A History of Greater California။ Wiley။ ISBN 978-1-118-29217-4။
California Gold Rush, 1848–1864။
1870 Fast Facts။ United States Census Bureau။
Wilson၊ Dotson; Ebbert၊ Brian S. (2006)။ California's Legislature (PDF) (2006 ed.)။ Sacramento: California State Assembly။
Destruction of the California Indians။ California Secretary of State။7December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
California Militia and Expeditions Against the Indians, 1850–1859။ Militarymuseum.org။
see also Benjamin Madley, American Genocide: The California Indian Catastrophe, 1846–1873, Yale University Press, 2012.။
California—Race and Hispanic Origin: 1850 to 1990။ U.S. Census Bureau။
Shipbuilding Essay—World War II in the San Francisco Bay Area: A National Register of Historic Places Travel Itinerary။
Richmond Shipyard Number Three: World War II in the San Francisco Bay Area: A National Register of Historic Places Travel Itinerary။
Rosie the Riveter National Historical Park, Kaiser Shipyards။
Saving the Bay—The Greatest Shipbuilding Center in the World။ KQED (August 11, 2010)။
Bill Watkins။ "How California Lost its Mojo"၊ October 10, 2012။
Rosa Maria Moller (May 2008)။ Aerospace States' Incentives to Attract The Industry 24–25။ California Research Bureau။
Markoff၊ John။ "Searching for Silicon Valley"၊ The New York Times၊ April 17, 2009။